Afrika Atsimo : 67 minitram-piovana – Andro ho an’i Mandela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2010 15:57 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Italiano, Español, Swahili, Português, Nederlands, Français, English
Nelson Mandela Loharano:www.ambassadors.net
Maro amin'ny olona no mahalala fa 27 ny isan'ny taona lanin'i Nelson Mandela tany am-ponjan'ny Nosy Robben any Afrika Atsimo. Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona momba an'i Madiba (fiantso ahafantaran'ny olona azy am-pitiavana any Afrika Atsimo) kosa dia ny 67 taona laniny nanoherany ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fahantrana. Ho feno 92 taona androany alahady 18 jolay 2010 ity filohan'i Afrika Atsimo teo aloha ity. Tao anatin'izay 16 taona farany izay dia tamin-kafanam-po sy fahazotoana tokoa no nankalazan'ny Afrikana Tatsimo ny tsingerintaona nahaterahan'i Madiba. Tamin'ny 2002 kosa anefa dia nampiasain'i Nelson Mandela ho fanentanana amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA manerantany, 46664, ity andro iray ity.
Tamin'ny taona 2009, nampivoatra ilay lasa nalaza ho “Andro ho an'i Mandela” ny fahombiazan'ny fankalazana sy ny fanentanana 46664, andro iray hanokanan'ny mponina manerana izao tontolo izao 67 minitra hanaovana an'izao tontolo izao ho toerana mahatamàna kokoa ho an'ny rehetra. Manazava ny mpikarakara:
Tapaka ary ny hevitra fa tsy misy zavatra sahaza ankoatra ny fametrahana fankalazana isan-taona ny tsingerintaonan'ny Madiba ho fampahatsiarovana ny vitany nandritra ny fiainany sy ny fikambanana mpanao asa soa [nosahaniny] ary mba hitohy mandrakizay ny fiarovana ny lova napetrany.
Nanana ny akony tokoa ny fahombiazan'ny Andron'i Mandela tamin'ny 2009 tany Afrika Atsimo. Nalaza tokoa hany ka amin'ity taona 2010 ity no lasa andro Iraisampirenena ho an'i Nelson Mandela araka ny notaterin'i Joburg:
Ity no ho andro Iraisampirenena voalohany ho an'i Mandela, araka ny tapaky ny Firenena Mikambana tamin'ny volana Novambra 2008, nanambara fa ho andro natokana hanaovana ny asa mahaolona ny andron'ny 18 jolay. Sambany ny Fifandaminana no nanokana andro iraisampirenena ho an'olo-tokana tahaka izao, hiaikena fa dindon'ny fanantenana ho an'ny voageja sy ny voahilikilika izy.
Na dia hankalazaina manerantany aza ity andro ity, dia any Madrid any Espaina kosa no nosafidiana ampahibemaso voalohany hanatontosana rindrankira hanamarihana ny andro iraisampirenena ho an'i Mandela, ka i BB King no nifanarahana hihira ao amin'io fotoana io.
Fa manana fandaharam-potoana hanatontosana rindrankira ihany koa ry zareo avy any New York. Mbola any amin'ity tanàna ity ihany, misy fampirantiana manandratra ny fiainana sy ny lovan'i Nelson Mandela napetraka ao amin'ny Grand Central Terminal any New York ho fanomezam-boninahitra ny Andron'i Mandela 46664. Teny telo refy [3-D] mamirapiratra miisa enina milaza fihetsehana no asongadin'ny fampirantiana: asa, mihaino, mitarika, mampivondrona, mianatra ary ny miresaka. Mampiseho ny lakilen'ny hafatra ampitain'ny soatoavin'i Nelson Mandela ary manainga fanahy ny mpitsidika hanatanteraka asa ny litera fanombohan'ireo voambolana tsirairay avy ireo.
Mitatitra ny Nelson Mandela Foundation:
Nifanaraka ny komity mpanolontsainan'ny tanànan'i Firenze any Italia sy ny Mandela Forum handefa lahatsary momba an'Atoa Mandela, sarimihetsika Invictus ary ny Mandela Day, ao amin'ny Mandela Forum sy amina sarimihetsika ankalamanjana any Florence. Nanapa-kevitra moa ny mpanolotsainan'ny tanànan'i Firenze ny hanohana ny Andron'i Mandela sy hanaika ny mponina rehetra ao Florence handray anjara amin'ny hetsi-panasoavana manerantany amin'ny alalan'ny fanasoniavana ny fanohanana ny Andron'i Mandela.
Heno hatrany Cuba ny antson'i Mandela handray anjara :
Nifanaiky nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana androany ny Vaomieran'ny Fifandraisana Ivelany ao amin'ny Antenimiera Kiobàna fa hankalazaina isaky ny 18 jolay ny andro iraisam-pirenena ho an'i Nelson Mandela.
Noraisin'ny Afrika Tatsimo ho antso handaniana ny 67 minitra amin'ity andro ity izy io hanatsarana ny fiainana ao amin'ny firenena. Hotontosaina any amin'ny faritra tiany handaniany ny androny ao amin'ny firenena misy azy izany hetsika izany.
PastorMosaSono no manontany:
Iza no hiara-dia aminay rahampitso @ 08h30 ao amin'ny Chris Hani Bara hanao asam-panadiovana mandritra ny 67min ho amin'ny Andron'i Mandela?
MuffinMegain indray manamafy:
Hankalaza ny Andron'i Mandela ao amin'ny Zoo Lake izahay hanampy amin'ny fanadiovana ny tontolom-piaraha-moninay!
Mpamaham-bolongana iray ao amin'ny Bolongan'ny fanantenana no nanambara fa tsy tokony ho androm-pialan-tsasatra velively ny Andron'i Mandela:
Afa-mahavita zavatra miavaka kely ny tsirairay amintsika ka ny ezaka itambarantsika no tena afa-manova tokoa an'izao tontolo izao. Tsy androm-pialan-tsasatra ny Andron'i Mandela – fa andro iasantsika rehetra miaraka.
Andao hifanampy hizara ny vinan'i Nelson Mandela ho amin'ny ampitso tsaratsara kokoa, hiasa amin'ity faran'ny herinandro ity, ary hiresaka momba izany ao amin'ny takelaka Facebook antsika. Mila aingam-panahy ve? vonona hizara ny ezaka nataony ho an'i Nelson Mandela ao amin'ny Facebook ihany koa ny tsirairay amin'ny ekipanay, ary indreto ny hevitra 67 amin'ny hanovana izao tontolo izao.
Toy izao indray ny ataon'ny mpanofa tany [fermiers] any Stellenbosch, Afrika Atsimo, ny fankalazana ny andron'i Mandela:
Nifandrisika hanapitra ny 67 minitra ho an'izay vonona ny mpanofa tany amin'ny alahady, ho fankalazana ny Andro iraisampirenen'i Mandela.
Nanokana sombintany ho an'ny vehivavy tsy manana asa ny “Vehivavy Mpanofa Tany”, mba hahazoan'ireo voatonona voalohany mitondra sakafo eo an-databany.
Ny tanjona moa dia ny hanalefahana ny fanavakavakana ara-pananahana eo amin'ny sehatrasa fambolena sy fiompiana.
Mpamaham-bolongana Tanzaniana, Simba Deo, no mampivoitra ny lanjan'ny fahafoizantena:
Amin'ny alalan'ny fanomezana no handraisana
Amin'ny fanolorana fitiavana no handraisana fitiavana
Amin'ny fahafoizantena no ahafoizan'ny hafa ny tenany ho antsika
Ny fahafoizantena ho an'ny hafa no lakilen'ny filaminana, fampandrosoana maharitra, fampivelarana ny fahafahana sy ny rariny. Ny mifanohitra amin'izany kosa moa dia mankamin'ny fitadiavana fanandratan-tena. Na inona na inona ataontsika dia ataontsika am-pinoana izany ary ho an'ny mpiara-bolona rehetra fa tsy ho amin'ny lazan'ny tena manokana.
Dorin sy ny Fokon'ny Bush Mpiady kosa mitaky antsika hanaja ny andron'i Mandela amin'ny alalan'ny fiarovana ny fiainan'ny bibidia sy ny tontolo iainana:
Tsy ho an'ny olombelona ihany fa mihoatra izany ny zavatra tena mahavariana vitan'i Nelson Mandela, satria maro ihany koa ny vitany ho an'ny fiainan'ny bibidia (biby tsy fiompy) sy ny tontolo iainana koa. Tahaka ny nofinofiny momba ny zon'olombelona ihany dia nanofinofy momba ny voary dia afrikana mivondrona ao anaty filaminana manerana ny firenena maro ihany koa izy. Hoy izy indray maka tamin'ny mpanao gazetin'ny National Geographic, Peter Godwin, “Nofiko ny mba hilaminan'i Afrika amin'ny tenany…Nofiko ny fahatontosan'ny fitambaran'i Afrika, ary manambatra ny heriny ny mpitondra ao aminy hamaha ny olan'ity kaontinanta ity. Nofiko ny fidadasiky ny tany hay, ny alantsika, ny halehiben'ny fiainana tsy nofehezin'olombelona. Tsy tokony adinoina velively fa andraikitsika ny miaro io tontolo iainana io. Ny fametrahana vala iraisana an-tsisintany (frontières) no lalana ahafahantsika manao izany.”
Efa nentinay ho anareo ny drafitrasany hiarovana ny Elefantan'ny faritra atsimon'i Afrika amin'ny alalan'ny fametrahana toerana manokana ho an'ny Elefanta. Amin'ny alalan'ny fidiran'ny fifandaminany an-tsehatra, ny Peace Parks Foundation, miaraka amin'ingahindriana Richard Branson, Mike Humphries, ary ny Virgin no hahatontosa izany nofinofiny izany hivaingana tokoa
Misy moa ny antsoina hoe “Mivoy bisikileta ho amin'ny andron'i Mandela” – vondrona mpanamory bisikileta (sy soavaly vy?) miisa 21 (miaraka amin'i Morgan Freeman) izay teo amin'ny andro fahaenina teny an-dalana manodidina ny tanànan'i Le Cap hiresadresaka momba ny Andron'i Mandela.
Raha mbola tsy resy lahatra ianao dia mba jereo kosa indray ary ity fanentanana ataon'ny Zokiolona (Mpitondra teo aloha maro) ity.
Hoy i Madiba tamin'ny fitsidihana iraisam-pirenena farany indrindra notontosainy tany Londres, Jona 2008:
Izao no fotoana ho an'ny taranaka ho avy hanohizana ny tolona hanoherana ny tsy rariny ara-piarahamonina sy ho amin'ny zon'ny olombelona rehetra kosa. Eo ampelatananareo izany.
Tantaran'ny Afrika Atsimo farany
01 Jona 2019Afrika Mainty
Afrikana ve ny Afrikanera? Lasan'ny mpanankarena hatrany ny tany mahafinaritra sy torohay hafa avy ao Afrika Atsimo
30 Mey 2019Afrika Mainty
Bilaogin'ny vehivavy Afrikanina: ny zon'ny vehivavy, herimpom-behivavy, fiovam-pinoana, …
Marina mafy tsy efa nihoatra ny 6 ora sy 7 minitra ny nandikako ity lahatsoratra ity fa efa tsy zatra sahady intsony.
18 Jolay 2010, 16:01
avylavitra Momba ny mpandray anjara »
Henjana koa izany Razoky an! ilay fifandraisana amin’ny 67mn, 67h-a, 6ora 7 minitra, na izaho aza ato efa votsa amin’ny fandikana fa variana manao fanitsiana sy mamoaka ny vita.
19 Jolay 2010, 05:28